मलेसियाबाट बाकसमा आएका शाहीको शव बुझ्दाको तस्वीरले फेरि भावविह्वल बनायो – Post Patrika
जिवित छँदै श्रद्धाञ्जलीको ओइरो, दारी बाले पोखे आक्रोश , को को विरुद्ध दिए उजुरी ? (भिडियो)
गरिबीको चपेटामा छन् तर सित्तैमा केही लिँदैनन् ७१ बर्षीय रिट्ठे बिश्वकर्मा
कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा भयो यस्तो चमत्कार डाक्टरनै परे चकित तपाईंको एक सेयरले अझै हौसला बढाउन मद्दत पुग्ने छ
ज्वाला संग्रौंलालाई के हुन्छ अब ?
कपाल र सौन्दर्यको लागी वरदान हुन्छ चौलानी पानी, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
मुख्य पृष्ठ /News/मलेसियाबाट बाकसमा आएका शाहीको शव बुझ्दाको तस्वीरले फेरि भावविह्वल बनायो
मलेसियाबाट बाकसमा आएका शाहीको शव बुझ्दाको तस्वीरले फेरि भावविह्वल बनायो
काठमाडौ । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा मोहन शाहीको नामवाट एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो । यो तस्बिर उनको आफन्तको हो । जो वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा थिए । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया रहेका उनका आफन्त हिमबहादुर शाहीको शव नेपाल आएपछि उनको परिवारमा देखिएको विह्वल अवस्था तस्बिरमा देखिएको थियो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नेपालीले यसरी नै ज्यान गुमाएका छन् । विदेश गएर परिवारका लागि पैसा कमाउने भन्दै गएका धेरै नेपाली यसरी नै वाकसमा फर्किएका छन् । अरुलाई एक दिनको समाचार हुन्छ तर जसको घरमा यो पी डा परेको हुन्छ उसको लागि जिवनभरको लागि हो । जिवन रहँदा सम्म आफन्त गुमाउनुको पी डाले छोड्दैन ।
यस्तै पी डा उनले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा झल्किएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना भतिजालाई यसरी काठको बाकसमा आउलान् भनेर उनले सोचेका थिएनन् होला । शाहीको शवको अगाडी निकै कारुणीक रुपमा रोएको देखिएका ति बालकको मनस्थितिमा अब जिवनभर कस्तो असर होला ?
फेसवुक हेर्दा मोहन शाही दैलेखका हुन् भन्ने देखिन्छ । यो तस्बिर पनि सोही जिल्लाको हुनुपर्छ । अन्य विवरण यो तस्बिरमा खुलाईएको छैन । तर यो तस्बिरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं नेपालीको पी डा बोलेको छ । दैलेखी सेवा समाजका अध्यक्ष समेत रहेका शाहीको तस्बिरले वास्तवमै लाखौं नेपालीहरुको कथा बोलेको छ ।
शाहीले लेखेका छन्,यो तस्वीरले साह्रै भावविह्वल बनायो ! ??? वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशियामा रहेका भतिज हिमबहादुर शाहीको ला’स काठको बाकसमा घरमा पुगेपछि भावविह्वल परिवारजन । भतिजप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना ।
मलेसियामा मेसिनले औला काटियो, तलबनै नदिई नेपाल फर्काइदै, सम्बन्धित निकाय मौन।
विराटले पिउने युरोपका हिमालको पानीको मुल्य सुन्दा चकित, सगरमाथाबाट यसैगरे देश कहाँ पुग्थ्यो !